सेनाको हेलीकोप्टरबाट डा. केसीलाई प्रहरी मृत्युको हल्ला फैलाएर जर्वजस्ती काठमाडौं ल्याइयाे – Online National Network
सेनाको हेलीकोप्टरबाट डा. केसीलाई प्रहरी मृत्युको हल्ला फैलाएर जर्वजस्ती काठमाडौं ल्याइयाे
जुम्ला, ३ असार — बीस दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले काठमाडौं ल्याउन झुटको सहारा लिएको छ । डा. केसीलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा काठमाडौंतर्फ ल्याइएको छ ।
काठमाडौं आउन तयार भए पनि डा. केसीले सेनाको हेलिकोप्टरमा नजाने अडान लिएका थिए ।सुरक्षा फौजको ठुलो जत्था लगाएर अपहरण शैलीमा एम्वुलेन्स मार्फत जुम्ला ब्यारेकमा लगिएको डा. केसीका समर्थकले आरोप लगाएका छन् । झडपका क्रममा घाइते भएका प्रहरीको मृत्यु भएको खबर सुनाएपछि केसी विक्षिप्त भए । उनी रुँदै ‘म काठमाडौं जान्छु’ भन्दै आफैं बेडबाट झरेका थिए ।
उनलाई जुम्लाबाट काठमाडौ ल्याएर महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा भर्ना गरिने बताइएको छ । केसीलाई काठमाडौं पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्याल जुम्लाले जनाएको छ ।
मृत्यु भएका भनिएका प्रहरी जवान कमल उपाध्यायको उपचार चलिरहेको थियो । ‘बल प्रयोग गरेर डा. केसीलाई बाहिर निकाल्दा थप तनाव हुने भएपछि यस्तो गर्नुपरेको हो’ स्थानीय प्रशासन स्रोतको दाबी छ । डा. केसीलाई सुनाइएको प्रहरीको मृत्यु भएको खबर सञ्चार माध्यमहरुमा पनि आयो । त्यसपछि स्थानीय प्रशासन आफैंले प्रहरी जवानको मृत्यु भएको खबर खण्डन गरेको छ ।
बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले डा केसीलाई ल्याउने प्रयत्न गर्दा जुम्लाबासीको अवरोधका कारण मुख्यमन्त्री रित्तै नेपालगंज फर्किएका थिए । मुख्यमन्त्री फर्किएलगतै प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि हस्तक्षेप गर्दा झण्डै ४० जना घाइते भएको नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ ।जसमध्ये दश जना चिकित्सक र अन्य विद्यार्थी घाइते भएको बताइएको छ ।
लामो समयको झडप पछि सुरक्षाकर्मीले डा. केसीलाई कब्जामा लिई सेनाको ब्यारेक पुर्‍याएको र सेनाको हेलीकोप्टरमार्फत अपहण शैलीले काठमाडौं ल्याई सैनिक अस्पतालमा लान लागिएको डा. केसीका वार्ता टोलीका सदस्य ओम अर्यालले बताए ।
डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं पठाईएपछि जुम्लाको स्थिति सामान्य भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विरामीको उपचार हुन थालेको छ, भने डा. केसीलाई लैजान खोज्दा भएको झडपमा घाईते भएकाहरुको पनि उपचार भईरहेको छ ।
डा. केसीलाई अस्पतालबाट उठाउँदा कर्फ्यू लाग्यो
२० दिन जुम्लामा अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उठाउँदा प्रहरी, प्रशासनले कर्फ्यू लगायो । त्यति गर्दा पनि स्थानीय महिलाले सरकारी अधिकारीलाई रोक्न खोजे । प्रहरीले लाठी बर्सायो । डीएसपीले कर्फ्यू लागेको सुनाएपछि सबै जना तित्तरवित्तर भए । डा. केसीलाई बाहिर निकालियो । स्थानीय महिलाहरुले माला लगाएर विदाई गरे । डा. केसी काठमाडौं फर्किदा निकै रोए । उनले नागरिकलाई दुःख नदिने समेत बताए ।